Iingcebiso kunye neengcebiso ngaphambi kokuba Ufundise Iklasi lakho lokuQala loMculo
Ungumfundisi omtsha womculo, kwaye kuyaqondakala ke ngoko, uzive ujabule ngokubamba iqela lakho lokuqala lomculo. Sele ulungele? Nazi ezinye izikhombisi zokugcina engqondweni ngaphambi kokuba wenze i-startbut yakho njengomfundisi.
Ugqoke ngokufanelekileyo . Oku kuya kuxhomekeka kwikhowudi yokugqoka yesikolo kunye nexesha labafundi oya kubafundisa. Gqoka iimpahla ezenza ukhangele ubuchwephesha kwaye uvumele ukuba uhambe. Hlala kude neepateni okanye imibala ephazamisayo.
Gqoka izicathulo ezifanelekileyo ezikhululekile.
Njengomfundisi, isixhobo sakho esibaluleke kakhulu lizwi lakho, ke qiniseka ukuba uyayinyamekela. Gwema nayiphi na into echaphazela lakho ilizwi. Xa ukhankanya iklasi yakho, vela izwi lakho ukuze iklasi lonke live. Qinisekisa nangona ungathethi kakhulu. Kwakhona, lijonge ngokwakho. Ukuba uthetha ngokukhawuleza abafundi banokuba nzima kunokuqonda kwaye ukuba uthetha abafundi abacothayo bangase bathuke. Gcina ucinga ukusebenzisa ukuchithwa okufanelekileyo kwaye ulungiselele isigama sakho ngokuxhomekeke kwiminyaka yabafundi bakho.
Qinisekisa ukuba iklasi lakho lixhotyiswe ngokufanelekileyo. Nangona kunjalo, oku kuya kuhluka ngoxhomekeke kubhajethi yakho yesikolo. Ezinye zezinto ezifanele zibe kwindawo yokufundela yomculo zi:
Izixhobo zomsindo kunye nevidiyo
Amathoyizi okanye umculo
Iincwadi zokubhala kunye neendawo zokugcina
Desk kunye nesihlalo sootitshala
Izihlalo zabafundi okanye indawo apho abafundi bahlala khona ngokukhululekile
Ukukhanyisa okufanelekileyo kunye nokuphuphuma umoya
Yenza ucwangco lwezihloko onqwenela ukuzenza kunye nezakhono ofuna abafundi bakho bafunde ekupheleni konyaka wesikolo.
Emva koko, yenza isicwangciso sesifundo seveki ukukunceda wena nabafundi bakho ukuba nifumane ezi njongo. Ngokuxhomekeka apho ufundisa khona, gcina ingqalelo kwiMigangatho kaZwelonke yeMfundo yeMculo xa ulungiselela ucwangciso lwakho kunye nezicwangciso zesifundo. Kwiveki nganye, qinisekisa ukuba isicwangciso sakho sesifundo sikulungele kwaye izixhobo ozifunayo zilungele.
Iindawo eziPhambili zeGitar Chords kunye neTabs
Izikolo eziPhakamileyo zeeKholeji zeSikolo
UArturo Alfonso Schomburg: Ukumba iMbali yaseAfrika
Indlela yokusebenzisa iziBhengezo zeDative zeJamani
Ukuqonda iWhale neDolphin
Guqulela i-RGB ukuya kwi-TColor: Fumana i-TColor Value for Delphi
Iqoqo leDatha yoPhuhliso lwaBantu ngabanye
Imbali kunye Nemvelaphi yoMkhosi weDurga Puja
Ukuqalisa - Ukwakhiwa kwezakhiwo zabaQaleli
Isicwangciso seMidlalo esihlaselayo: Uqeqesho lwe-4-3-3